I-china Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Umkhiqizi kanye nomphakeli | Yubing
I-Counter-flow Circuit Cooling Towers / Ama-Coolers avaliwe wesifunda avaliwe
Umoya opholile owomile ungena ngezindawo zokuphumula ezinhlangothini zombili zombhoshongo ezansi, bese udweba ubheke phezulu nangaphezulu kwamakhoyili ngamandla avela kufeni ye-axial efakwe phezulu, enyakazisa amanzi awayo (avela ohlelweni lokusabalalisa amanzi) nokwandisa ukusebenza kahle kokushisa esimeni somoya oshisayo omanzi okhishwa embhoshongweni waya emkhathini. Ngalesi sikhathi sokusebenza, inani elincane lamanzi ajikeleza kabusha ayahwamuka ngenxa yokudluliswa kokushisa okufihlekile ngepayipi nezindonga zamakhoyili, kususa ukushisa kohlelo. Kule ndlela yokusebenza, ngenxa yokusebenza kokuhwamuka kwehlisa izinga lokushisa lamanzi okushiya namandla we-fan alondoloziwe.
Incazelo yokusebenza komkhiqizo
Uma kuqhathaniswa nemibhoshongo yokupholisa yohlelo oluvulekile, okulula ukuyigcina kuyisici esihlukile sama-coolers wesekethe avaliwe evaporative okuyindlela enhle kakhulu kunoma yiluphi uhlelo lokupholisa olunezinye izinzuzo ezilandelayo:
► Nciphisa ukusetshenziswa kwamanzi, wonge amandla nokugcinwa kwemishini.
► Gwema ubungozi obukhulu bezinto ezingcolisayo kubanikezeli bokushisa noma izikhungo ezifanayo.
► Ukonga okubalulekile nokusebenza kwezindleko zokusebenza (asikho isidingo sepompo, ama-valve, imisebenzi eyengeziwe yamapayipi njll.)
►Imvelo yokufaka ebanzi - imishini evaliwe iyatholakala ukuze isebenze emazingeni okushisa angaphandle aqandayo. Kuyinto eguquguqukayo kakhulu kusuka ekupholiseni imishini yenqubo yezimboni ukugcina amazinga okushisa ezikhungweni zedatha nasemakamelweni ekhompyutha kuya ekukhiqizeni amakhemikhali.
Isakhiwo se-ICE Evaporative counter-flow closed coolers 'sakhiwo nezethulo zezinto ezisemqoka:
Umoya System (Fan)
Umlandeli we-axial wangaphandle osebenza kahle ngokwakhiwa kokuvikela okuthathu, ifakwe i-aluminium blade ne-IP56, imoto eqhutshwa ngebanga lakwa-F ene-ventilator eyenga evimba umoya futhi inciphise ukuvuza.
Uhlelo Lokuhambisa Amanzi Oluthuthukile
I-ICE evaporative evaliwe iluphu yokupholisa imibhoshongo efakwe obhasikidi wohlobo lwesifutho imibhobho ihlala igcwele ngaphandle ngenkathi ihlinzeka ngokulingana nangokusatshalaliswa kwamanzi ukukhulisa ukudluliswa kokushisa phakathi komoya, amanzi kanye nenqubo uketshezi ukwandisa ukusebenza kahle kokwenqaba ukushisa.
Imibhobho yesifutho efakwe emapayipini okusabalalisa amanzi angenakho ukugqwala ukuze ihlukaniswe kalula.
Ishubhu Elibomvu Lethusi
Ishubhu yengxenye esemqoka isebenza ngekhwalithi ephezulu yohlobo lwe-T2 ebomvu eyathenga kumkhiqizi womkhiqizo odumile ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokuzinzile kwemishini yethu.
Yakhiwe futhi yenziwa nge-PVC ukunciphisa ukulahleka kwamanzi ngesikhathi sokusebenza okumanzi futhi kukhawulela izinga lokukhuphuka ekwehliseni ukusetshenziswa kwamanzi nokugwema ukukala.
Kukhona i-damper ekhonza ukulawula ukuhamba komoya ngesikhathi sokusebenza kwemibhoshongo yokupholisa isetshenziswe emanzini athile, uhlelo lokushisa impompi yomoya noma inqubo efanayo yokupholisa ukugwema ukulahleka kokushisa ngesikhathi sokuphumula semishini ikakhulukazi lapho kubanda.
Lapho izinga lokushisa lomkhathi lingaphezu kuka-0 ℉ (-18 ℃), ngesifudumezi sikagesi izinga lokushisa lamanzi endishi ngeke lehle kunama-40 ℉ (4.4 ℃). Kukhona ukuvikelwa kwamanzi okuphansi okusethwe kwi-heater ukuqinisekisa ukuthi kuzosebenza kuphela lapho kucwiliswa emanzini. Zonke izinto eziphathelene neheater kagesi zifakiwe ngaphakathi kwesikhwama futhi zivumelanisa nokusebenza kwangaphandle.
Umsele wamanzi owakhelwe emthambekeni
Umklamo wethambeka (uthambekele ekubhekeni kokuphuma kokungcola) ukugwema ukumiswa kwamanzi nesisefo sensimbi engagqwali kuzothuthukisa ukuchichima nokukhishwa kokungcola ngasikhathi sinye kususa ukungcola nokungcola okusendishini.
Imibhoshongo ejwayelekile yokupholisa i-ICE isebenzisa ishidi lensimbi elenziwe ngokugqwala kakhulu elinezinsimbi njenge-substrate eyinhloko, ngokuhlanganiswa ne-Al, Mg kanye nenani le-silicon. Impilo yesevisi yinde ngokuphindwe izikhathi ezi-3 ~ 6 ngokuqhathaniswa nensimbi yensimbi evamile ene-aluminized zinc nesici sokumelana nokushisa nokushisa okushisayo nakho kuhle kakhulu.
Langaphambilini Isiphambano Sokuvalwa Kwesifunda Esivaliwe Sokupholisa Imibhoshongo / Amapholishi Okujikeleza Okuvaliwe Wesifunda
Olandelayo: Uhlelo lwe-ICE Chemical Dosing for Water Treatment ku-Cooling Tower System
Amapharamitha wezobuchwepheshe we-Counter-flow Closed-circuit Cooling Tower
Usayizi wepayipi wokungena / wokukhipha
Usayizi wepayipi lokunikezela
Ukusebenza Ingcindezi Ibanga
Kuvaliwe ukuphola kwesifunda
Kuvaliwe Ukupholisa Umbhoshongo
Kuvaliwe-wesifunda Ukupholisa Tower
I-Closed-loop Cooling Tower
Ukuphikisana nokugeleza kombhoshongo wokupholisa wesifunda ovaliwe
Ukuphola okuvalekile kwe-evaporative
Umbhoshongo opholile ovaliwe ovuthayo
Umbhoshongo wokupholisa amanzi opholile ovaliwe ngamanzi